Inona ireo toro-hevitra farany momba ny SEO hianika eo amin'ny tendron'i Google?
Misy fiovana lehibe sy fanavaozana natolotry ny Google hatramin'izao amin'ity taona ity. Ary betsaka ny volan'ny SEO farany momba ny 2017 amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana na aiza na aiza ao amin'ny tranonkala. Noho izany, inona ireo vahaolana matotra indrindra tokony horaisinao amin'ireo karazana tricks, torolalana sy soso-kevitra samihafa? Tadidio fa ny teti-bolanao Search Engine Optimization kokoa no anananao, ny tombontsoa bebe kokoa azonao raisina. Andao hijery fijery fohy ary hijery hoe inona ny fivoarana mbola manjaka, iza amin'ireo no mety ho lany tamingana, ary raha misy ny zavatra taloha izay tsy miasa intsony, na ratsy kokoa, dia mety ho lasa lasibatry ny fanitsakitsahana ny natiora izay tsy azo ihodivirana mihitsy miaraka amin'ny sazy Google.
Amin'izao fotoana izao, ny votoatin-tseraseran'ny tambajotra sosialy dia mbola misongadina kokoa amin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana ao amin'ny Google (SERPs). Araka ny fikarohana vao haingana, ireo manam-pahaizana ao amin'ny orinasa dia manondro fa manana ny lanjany sy ny kalitaon'ny fifandraisana amin'ny sehatra sosialy (toa an'i Google+ - logiciel creation fiche de paie gratuitous arp. YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, sns. ) dia hihazona hatrany ny heriny, farafaharatsiny amin'ny hoavy azo jerena.
Tsy mahagaga raha ny votoatin'ny video izao dia vahaolana tsara ho an'ny firotsahana an-tsehatry ny vahoaka sy ny traikefan'ny mpampiasa kokoa. Ny tena zava-dehibe - amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia vao mainka azo ekena kokoa noho ny tamin'ny taona 2016. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny toro-làlana SEO farany dia nahazo ny fijerena ireo horonantsary izay afaka manatsara ny pikantsary ankapobeny. Ary ny antontan'isa sasantsasany dia naneho soso-kevitra mahavariana hafa, araka ny loharanom-bolan'ny indostrialy malaza, ny votoaty lahatsary dia natokana hanomezana 40% -n'ireo tsindrim-pifandraisana (raha ampitahaina amin'ny asa soratra isan-karazany).
Tranobe fanalefahana ny finday
Ity ny iray amin'ireo toro-hevitra farany SEO farany indrindra. Manontania tena fotsiny raha toa ianao ka mifandray am-po amin'ny tranonkala ara-barotra. Andeha hiatrika izany - Manana fotoana voafetra ianao mandra-pahatongan'ny fampisehoana Mobile-First Index (farany vao haingana no nanamarina azy io tamin'ny 2018). Noho izany, tsy ela dia hanova ny tena zava-misy ny fanatsarana ny finday, ka lasa toe-javatra mahazatra. Izany no antony nahatonga anao hivezivezy eritreretina hivoatra sy hampivelatra ny paikady fanatsaràna napetrakao tamin'ny ankapobeny noho ny fomban'ny habaka fitadiavana finday.
Tahaka ny fironana amin'izao fotoana izao ho an'ny fampivoarana finday, ny fitadiavana ny feo dia manaraka ny fitafy! Ary vetivety dia hifantina ny safidin-tsofin'ny feo fa ny fitsipika vaovao, fa tsy ny fisokafana. Ankoatra ny hoe ny fandinihan-kevitra amin'ny feo no mahatonga ny fiarovana amin'ny fiara, ny fahaizany mandroso dia novolavolan'ireo indostrialy goavam-be, ka ny tsirairay dia manomboka ny dikan-teny manokana momba azy ireo amin'ny rafitry ny fikarohana (e. h. "Cortana" avy amin'i Microsoft, "Google Now" avy amin'ny karazana fitadiavan'izao tontolo izao, ary "Siri" avy amin'i Apple).
Bigger content Aggregation
Here is my suggestion. Anatin'ireo sisa amin'ireo toro-làlana SEO farany, misy ny fahatsapana tsara amin'ny fanangonana votoaty, izay lasa kokoa sy tsara lavitra kokoa. Midika eto aho fa ny vondrona ety anaty aterineto dia fomba azo ampiharana ny votoatin-tsoratra efa voafaritra mialoha avy amina loharano maro samihafa hitarihana ny vondron'olona kinendry. Amin'ny teny Anglisy tsotra, izay mametraka fitehirizana mivantana amin'ny fanamafisana ny votoatin'ny loharanom-pahefana avo lenta amin'ny fiheverana amina toerana ambony. Mety ho hafahafa ho antsika izany, saingy misy hendry maromaro ao Moz sy Hubspot, ohatra, dia efa nahavita tetikasa toy izany nandritra ny fotoana lava be (jereo ao amin'ny Inbound. org). Noho izany, fotoan-dehibe ny handinika ity fironana vaovao momba ny votoatim-baovao ity ary manomboka manangona sy mikarakara azy amin'ny loharano hafa avy amin'ny tompon'andraikitra ambony indrindra momba ny foto-kevitrao.